Mmekorita - YTpals
Nweta 20% Commission na Ahịa & nata ụgwọ mgbe m nwesịrị $ 100 +
Banye ma obu Deba aha gi na nmekorita ya
Ihe omume anyị bụ n'efu isonye. Ọ dị mfe ịdebanye aha ma ọ nweghị ihe ọmụma ọrụ aka. Mmemme mmekorita bụ ihe a na-ahụkarị na ntanetị ma na-enye ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ụzọ ọzọ iji rite uru na weebụsaịtị ha.
Didie ke enye ọrụ?
Mgbe ị sonyere na mmemme mmekọ anyị, a ga-ewebata gị njikọ URL nke pụrụ iche ị nwere ike itinye n'ime weebụsaịtị gị ma ọ bụ kesaa site na email ma ọ bụ na ibe mgbasa ozi mgbasa ozi gị. Mgbe onye ọrụ pịrị na otu n'ime njikọ gị pụrụ iche, a ga-ebute ha na weebụsaịtị anyị ma na ngwanrọ njikọ anyị jikọtara omume ha. Will ga-enweta ọrụ mgbe ha zụtara ihe ọ bụla.
Nkọwa ihe omume
Commissiondị Commissionlọ Ọrụ: Paykwụ -gwọ-Kwa-20% maka ahia ọ bụla ị na-ebuga.
Chọrọ ụgwọ ụgwọ: $ 100 USD - Obere nguzozi chọrọ maka ịkwụ ụgwọ.
Oge Pakwụ :gwọ: A na-akwụ ụgwọ ego otu ugboro n'ọnwa, maka ọnwa gara aga.
Maka nkọwa ndị ọzọ niile, biko kpọtụrụ anyị.
Bụrụ onye mmekọ ugbu a